Mmiri mmiri dị m nso na ọmarịcha nsụda mmiri 40 dị na United States niile
By Na -agba egwu September 10, 2021 Travel 0 Comments
- Mmiri mmiri dị m nso -
Ị na -achọ ọmarịcha nsụda mmiri n'akụkụ US? Ọ bụrụ ee, mgbe ahụ ị nọ n'udo. Nke a bụ n'ihi na anyị achịkọtara ozi niile ị ga -achọ ịchọpụta nsụda mmiri gbara gị gburugburu n'otu ebe!
Gaa n'ihu n'ịgụ iji chọpụta ebe ụfọdụ nsụda mmiri dị ịtụnanya na nke dị na United States dị. Ụfọdụ n'ime nsụda mmiri 30+ ndị a nwere ike iju gị anya na ha dị nso na ebe ị bi.
A bịa n'ihe ndị e kere eke, enweghị mgbagha mmiri na -adị n'elu ndepụta ahụ, ọ bụ ya mere ọtụtụ mmadụ, gụnyere anyị, ji nwee mmasị na ha.
N'ihi nke a, anyị achịkọtara ndepụta mmiri mmiri 30+ na United States niile ị nwere ike ịga lebanye na listi ịwụ gị.
Mmiri mmiri 30+ kacha mma n'ofe US
N'okpuru bụ ụfọdụ nsụda mmiri dị n'akụkụ m na gafee United States:
1. Mmiri Caney
Mmiri Caney Creek na Oke Caney Creek Falls bụ ụfọdụ ọmarịcha okirikiri na Alabama, nke dị na mpụga Ọzara Sipsey na Double Springs.
N'etiti mpaghara mara mma zoro ezo nke dị n'elu Creek nke Caney, n'ime okwute ndị nwere akpa na osisi na-achaghị acha, ije dị kilomita atọ site na oke ohia miri emi na mmiri dị n'okpuru mmiri na-erute na-agbada kwa afọ.
Oké mmiri ozuzo na -emepụta ákwà ngebichi mmiri abụọ, nke na -esi na bọọdụ abanye na ala nke ebe igwu mmiri. Kpachara anya banyere ịbịaru ọgba ndị a na ụzọ ọwa mmiri si dị warara, wee kwadebe onwe gị maka ọzụzụ.
Wepu ebe na -adọba ụgbọala na Roaring Fork Nature Trail banye n'ọmarịcha osisi osisi n'akụkụ Trillium Gap Trail.
Na -agagharị n'oké ọhịa nke aesụ, ọla ọcha, na maple ndị ọbịa na -eleta ogige ahụ na ndị na -egbu osisi na ọkụ na -ebuga ihe oriri na ebe obibi LeConte maka otu maili.
N'ịgbaso mgbatị nke mbụ, ị ga -anụ mkpọtụ Roaring, mkpọtụ na -arị elu mgbe niile na -agbada n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Osimiri Little Pigeon site na Mt LeConte.
Ị ga -eru Ọdọ mmiri Grotto na mgbatị ogologo ogologo. Naanị ije ije dị mfe, ị nwere ike rute ọmarịcha nsụda mmiri Appalachian na naanị ụzọ mmiri dị na Smokies ị nwere ike ịga.
Nugget Falls dị n'elu ugwu dị nso Glacier Mendenhall. Ọ nwere ike ịdị oke mmiri mmiri igwu mmiri, mana ị nwere ike gbagoro n'ụkwụ ọdịda wee hụ ntụpọ ya.
Ọ bụrụ na ị na -enwe ekele maka anụmanụ, ị ga -enwe obi ụtọ ịnụ na o yikarịrị ka ị ga -ezute beavers, ugo nkwọcha, ewu ugwu, na ọbụna anụ ọhịa bea n'okporo ụzọ ahụ.
Big Goat Falls bụ ọmarịcha okpu mmiri nke ekwesighi ileghara anya. Ọ dị n'ime Ncheta Misty Fjords National ma nwee elu 1831 ụkwụ yana ọdịda nke ụkwụ 800.
4. Ogige Falls
Mmiri mmiri mbụ dị na ndepụta anyị dị nso ebe ịnọ.
Kpọọ egwuregwu pịịkị, zuru ike n'akụkụ mmiri dị n'akụkụ, ma ọ bụ jiri mkpagharị na -agagharị na Falls Park dị na Osimiri Reedy na ogbe ndịda Greenville iji hụ ọmarịcha nsụda mmiri na -asọfe ozugbo site na ọmarịcha obodo anyị.
Cheaha Falls, ọmarịcha ụgbụ ụkwụ 30 nke na-asọ site na okwute n'akụkụ Chinnabee Silent Trail na Cheaha Creek na Talladega National Forest, dị n'akụkụ okporo ụzọ Silent Chinnabee na Cheaha Creek na Talladega National Forest.
Ọhịa National Talladega bụkwa ebe Ugwu Cheaha, ugwu kachasị elu nke Alabama, ọ bụkwa ebe a ka Cheaha Creek si malite, gbadata n'ugwu wee mepụta ọmarịcha Cheaha Falls.
Ọzọkwa, ọmarịcha okirikiri ụzọ atọ dị mma bụ njem dị kilomita atọ site na ebe a na-adọba ụgbọala n'okporo ụzọ na Talladega Scenic Byway ma ọ bụ njem otu maịl site na Turnipseed Hunting Camp na Alabama Highway 281 ebe ị nwere ike banye na nlele, were. igwu mmiri, ma ọ bụ maa ụlọikwuu n'otu abalị.
Havasupai ndoputa India, Arizona
Havasu Falls dị na mpụga Grand Canyon Park. Ọ dị nso na ndoputa Indian Havasupai ma ọ bụ nsụda mmiri siri ike ịbanye, mana ọ bara uru ileta mgbe ị na -ede akwụkwọ, na -aga kilomita 10, wee maa ụlọikwuu n'ọzara abalị.
Mana oke osimiri na -acha anụnụ anụnụ yiri ihe mara mma ozugbo ị nọ ebe ahụ.
7. Akwa Ejima Ejima
Twin Falls nke High Bank fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 75 n'ogologo. Ọ na -ekewaa mịrị mmiri ahụ n'ime iyi abụọ nke na -agbada n'ime ọdọ mmiri dị n'okpuru n'elu okwute na okwute. Na ozi ọma: ihe na-erughị ọkara maịl bụ ije ije na ya.
8. Mmiri Yosemite
Ogige Ntụrụndụ Yosemite, California
Ị maara isi ihe dị na mmiri mmiri niile dị na Sierra Nevada mara mma? Ee, ọdịda nke kpakpando atọ ahụ dị elu dị mita 3! N'oge opupu ihe ubi, mgbe snow na -agbaze, oge kacha mma iji gaa bụ.
CVS dị m nso
AutoZone nọ m nso
Scrap nso m
Ọhịa ọzọ tozuru oke na otu n'ime ụzọ kacha pụọ ​​na Smokies n'ụbọchị anwụ na -ekpo ọkụ bụ otu awa site na Grotto Falls site na Gatlinburg.
N'ime njem a na -esiri ike, ị ga -emesịa si n'ebe a na -adọba ụgbọala banye n'ụzọ siri ike (mana ọ ka na -ahụkwa anya) nke ga -anabata gị site na nnukwu osisi tulip, hemlocks na nnukwu cherry ojii - ụfọdụ n'ime osisi ndị kacha ibu na ogige ahụ!
Ị ga -ezutekwa Ramsey Prong dị ka mkparịta ụka gị, na -amaja, na -ebili enyi maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njem niile.
10. Agbamakwụkwọ Veil Falls
Agbamakwụkwọ veel Falls bụ ebe kacha mma ịhụ nsụda mmiri kacha elu na Colorado nso. Ọ na -agbada mita 365 ma bụrụ ihe ịtụnanya ịhụ onwe ya n'oge ọ bụla n'afọ - ọbụlagodi mgbe oyi kpọnwụrụ ya n'oge oyi.
Agbanyeghị, dụọ gị ọdụ, ịrị elu ebe ahụ siri ike, yabụ na -eyi uwe kwesịrị ekwesị.
Na Caesar's Head State Park, were ụzọ Raven Cliff Falls dị kilomita abụọ iji hụ ọmarịcha Raven Cliff Falls dị 420 site na àkwà mmiri nkwụsị. Enwekwara ọtụtụ ụzọ mkpagharị na ogige ị ga -ahọrọ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye njem nwere ahụmịhe karịa, ị nwere ike were Dismal Trail gaa na akwa nkwusioru nke na -agbada ọdịda. Ọ bụ okirikiri 8+ na -ama aka, mana ọ bara uru.
12. Ụgbọ mmiri Cumberland
Ha na -akpọ ya Niagara nke Ndịda, anyị pụkwara ịhụ ihe kpatara ya mgbe anyị nwesịrị ya n'onwe anyị!
Mmiri mmiri ozuzo a sara mbara na akụkụ anọ nwere ike bụrụ ihe ama ama n'ihi ikike o nwere imepụta akpa mmiri nke ọnwa (nke a makwaara dị ka moonbows). Ha bụ egwurugwu ọdịnala n'elu ntọala ya, nke dabara anyị nke ọma.
Mgbakwunye nke ọdịda ọdịda na ọnọdụ na -enwu enwu!
13. Ọdụ mmiri Tahquamenon
Ọ bụ ezie na anyị maara na Oke Peninsula nke Michigan nwere ọtụtụ nsụda mmiri yana ọmarịcha Foto dị egwu, ụdị ngọngọ nke nsụda mmiri a na osimiri nwere tannin sara mbara dọọrọ uche anyị.
Anyị nwere ike ịnụ ụtọ ịma mma a site n'ọtụtụ ebe, ha niile nwere akụkụ okike pụrụ iche nke UP. Ọzọkwa, anyị enweghị ike ịgbagha ịma mma ya, ma anyị hụrụ ya site na nsọtụ ya ma ọ bụ site n'ebe dị anya site na Osimiri Tahquamenon.
Lower Tahquamenon Falls, ebe mgbaba dị n'okpuru ala, bụkwa akụkụ nke nnukwu nsụda mmiri a.
Akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ, ma ọ bụrụ na -egbu oge nke ọma, nwere ike nye ọmarịcha agba karịa ebe mara mma.
Isi ihe dị na ndịda-ọwụwa anyanwụ Washington's Palouse Falls State Park bụ ọmarịcha ọghọm nke Osimiri Palouse gafere n'ọnụ ọnụ ya na n'elu ọmarịcha Ice Age gbapụrụ na basalt kọlụm.
Ọzọkwa, ọ bụ mgbada mita narị abụọ, nke na -awụsa olulu mmiri n'akụkụ akụkụ okwute ya, yiri ihe si na Jurassic Park.
Ọ bụ ezie na emechiri ogige n'ogige ugbu a n'ihi COVID-19, ndị ọbịa nwere ike họrọ isi ihe atọ dị iche iche, otu n'ime ha bụ ije nkọwa n'ụzọ dabara na ADA.
15. Mmiri na -ada
Nda nsụda mmiri bụ nsụda mmiri dị mita 73. Mmiri ya na -emikpu n'ime olulu miri emi, ebe nsụda mmiri ahụ na -abanye n'ọgba. Ọ bụrụ na -amasị gị, ị nwere ike lelee anya na sink.
Enwere ụzọ mbata. Mgbe oke mmiri zoro, ọ bụ oge kacha mma iji hụ ihe a.
Agbanyeghị na cascades ndị ọzọ na ndepụta anyị nwere ike ọ gaghị ezu ma sie ike, ha ga -abụrịrị otu n'ime nsụda mmiri kacha mma na mba ahụ!
N'ime nnukwu mpaghara Grand Canyon, ọ na -agbakwa afọ niile, na -eme ya ọpụrụiche.
Ọ bụ maka agba na iche na nke a. O jikọtara ihe ndị a n'ụzọ nke ọ bụla ọzọ anyị hụtụrụla ruo taa enweghị atụ.
N'etiti oriri anya bụ Havasu Creek mmiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ turquoise, travertines na mgbochi mmiri gbara gburugburu ọdịda, yana oke okwute na-acha uhie uhie nke nwere ike iwepụta ọnọdụ dịka Grand Canyon.
17. Oke egwurugwu
Ogige State Watkins Glen, New York
Enwere ọtụtụ ọmarịcha nsụda mmiri na mpaghara Finger Lakes, mana Watkins Glen State Park dị ka ihe si na Onyenwe mgbaaka.
Ụzọ anọ, nsụda mmiri 19, ọdọ mmiri lily, ụzọ gburugburu ebe obibi, yana akwa nkwusioru dị afọ 151 nwere ike ịchọta na glen.
Banye na nbata South wee rịgoro steepụ ihe ndina (120 steepụ kpuchiri ekpuchi), wee zoro n'azụ ákwà mgbochi mmiri na Cavern Cascade, tụọ ọkwa Jekọb nke dị 180, wee laghachi n'akụkụ North Rim Trail na-ele anya ọmarịcha ahụ maka atọ- mgbatị mile.
Echefula Egwurugwu egwurugwu, nke nwetara aha ya site n'ụzọ ìhè anyanwụ si agbawa mgbe ọ kụrụ mmiri otu ahụ, ma ọ bụ Central Cascade, nke bụ ọdịda kachasị elu na ụkwụ 60.
Ejima Falls, Idaho
A na -akpọ ya West Niagara, agwọ ndị a buru ibu ma buru ibu nke ukwuu karịa ezigbo Niagara (ụkwụ 212) (ụkwụ 900).
Nke a na -eme ka ọ bụrụ otu n'ime ọdịda ebumpụta ụwa kachasị ukwuu na mba ahụ kemgbe ụbọchị Oregon Trail, ọ bụ ebe nlegharị anya na -adọrọ adọrọ.
Mmiri nkịtị na -adị n'etiti cubic 10,000 ruo 12,000 na sekọnd, ọ bụ ezie na mmiri gbazere nwere ike iru ihe ruru cubic 20,000 kwa sekọnd n'oge oke oyi nke oke snow na -ada.
Oge opupu ihe ubi na -abụkarị oge kacha mma ị ga -aga, mana tupu ịpụ, ndị njem kwesịrị ilele iyi ndụ ha Shoshone Falls mgbe niile.
Osimiri Columbia River Gorge, Oregon
Nke a bụ isi mma nke famed Oke Osimiri Columbia, nke na -agbada mita 620 kwa afọ, bụ otu n'ime nsụda mmiri ndị ama ama na United States.
Ọmarịcha ọdọ mmiri ahụ nwere ọtụtụ nsụda mmiri, nke ọtụtụ n'ime ha na -adọrọ mmasị.
Ọ bụ onye na -asọrịta mpi siri ike maka aha oke mmasị mara mma nke Oregon! Ọ dịkwa mfe ịhụ ihe kpatara ịgbaso njem anyị na nsụda mmiri a.
Site na ịma mma dị ka nsụda mmiri, enweghị m nhọrọ ọ bụla karịa itinye ya na listi Top 10 anyị.
Oké Nkume Nkume State agụụ, Illinois
Oké Nkume Nkume State Starved bụ catnip maka ndị na -achụ nsụda mmiri, dị n'etiti ahịhịa ọka bucolic ihe dị ka awa abụọ na ndịda ọdịda anyanwụ Chicago. Mmiri na-agbaze kpụkọrọ akpụkọ kpụrụ ọmarịcha ájá ájá ájá ájá dị n'ogige ogige 18, nke na-eji nsụda mmiri agbapụta n'oge opupu ihe ubi ọ bụla.
Site na kilomita 14 nke ụzọ mkpagharị, nke a bụ ebe ị nwere ike họrọ njem nke gị: ị nwere ike ịga n'azụ mkpuchi LaSalle Waterfall nke nwere ụkwụ iri abụọ na ise, lee ihe ijuanya na ejima 25 ụkwụ nke Tonty Canyon dara, ma ọ bụ ju gị anya na ogige abụọ 60- n'okpuru, otu na St. Louis Canyon na nke ọzọ na Cancyon Wildcat.
Ọ na -adị gị ka ị na -atụ egwu? Mee atụmatụ nleta n'oge oyi, mgbe ogige ahụ na-enye ohere ka ndị na-arị ugwu kpụkọrọ akpụkọ tụda atọ n'ime ọdịda ama ama ama mpaghara.
21. Akpọrọ nkụ
Ugwu, North Carolina
US Forest Service akpọwo Nantahala National Forest Mountain Waters Scenic Byway ka ọ bụrụ ogologo okporo ụzọ dị kilomita 61.3 nke na-aga n'etiti Almond na ugwu.
Tupu iru oke egwu Ọdịda, ihe ịtụnanya dị mita 75 nwere ebe a na-adọba ụgbọala, ị ga na-amị amị site na ndagwurugwu mmiri abụọ na site na ọdọ mmiri abụọ, Wayah Bald na Cullasaja Gorge.
Ọbụlagodi na ị nwere ike ịhụ ntụpọ site na nlele, gaa n'ụzọ n'azụ ọdịda. Nkume ahụ na -arị elu nke ukwuu ịghara mmiri mmiri na ohere foto dị egwu.
Na Cherokee, aha “Amicalola” pụtara “osimiri na -akụda,” nke na -akọwa nke ọma Amicalola Falls. Site na mgbada nke 729 ụkwụ, ọ bụ nsụda mmiri nke atọ kachasị elu na-agba mmiri n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Osimiri Mississippi.
Enwere ike ịchọta ya n'akụkụ ngwụcha ngwụcha ndịda nke okporo ụzọ Appalachian dị kilomita 2,000.
23. Wailua Falls dị na Kauai
Aha mmeghe nke ngwụcha afọ 1970/mbido 1980 mmemme TV Fantasy Island mere ka ejima a daa ama.
Ọzọkwa, ejima ahụ na -ada, nke na -agba na Osimiri Wailua na nsọtụ ndịda, wụpụ site na ugwu dị mita 80 n'ime ọdọ miri dị 30 ụkwụ ma nwee ike jikọta n'otu nsụda mmiri mgbe oke mmiri ozuzo siri ike.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ egwurugwu, bịa n'isi ụtụtụ.
Ọ dịghị mkpa iweta akpụkpọ ụkwụ ndị njem n'agbanyeghị ihe ihu igwe dị: Enwere ike ịhụ nsụda mmiri a site na ebe ndị njem na -adọba ụgbọala, nke dị ihe dị ka nkeji iri na ise n'ebe ugwu ọdụ ụgbọ elu Kauai Lihue.
24. Ọdịda Union
Ogige Nationalstone Yellow, Waị
Nke a chọrọ nnukwu mbọ iji ruo nsụda mmiri niile dị na ndepụta a.
Njem ahụ gụnyere nnukwu osimiri na -emegbu mmadụ, mgbanwe dị elu nke ịdị elu mgbe ọ na -abanye n'ókèala anụ ọhịa bea grizzly. Mana ihe nrite kachasị maka njem a bụ nsụda mmiri.
Gbanyụọ 260ft, ya na nnukwu osimiri abụọ enweghị oke mmiri ọ bụla ọzọ nke anyị hụrụ na ọmarịcha ịma mma, enweghị nsụda mmiri ọzọ dị ka nke ahụ!
Dị ka a ga -asị na ezughi oke, nsụda mmiri na mmiri mmiri n'ime ọdọ mmiri Ouzel mere obere njem n'akụkụ.
Na nso Buffalo, New York
Ọ bụ United States ' Nna nna nke Waterfalls, karịrị nnọọ ndị ọzọ niile n'ihe gbasara ike dị ọcha, ịdị ukwuu, ewu ewu na ihe ndị ọzọ.
Weta akwụkwọ ikike ngafe gị wee gaa ebe a ma ama ama ama n'akụkụ ụwa abụọ, nke Western New York na United States na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Ontario na Canada na-ekerịta.
Ọ bụghị naanị na ị ga -ahụ nlele zuru oke nke ọdịda site n'ọtụtụ ebe dị egwu, mana ị ga -esonye na mmemme dị iche iche.
Echere m na nsụda mmiri a bụ otu n'ime Nnukwu atọ nke ụwa, yabụ na ọ na -ewere ọnọdụ kachasị mfe n'etiti Top 10 nke America.
26. Mmiri mmiri mmiri
At Blackwater Falls nke West Virginia Ogige Steeti, mmiri ojii nke akpọrọ Blackwater Falls dabara akụkọ ise n'ime osimiri dị n'okpuru.
Osimiri na-acha odo odo na-agbada ma na-agbagọ na ogologo ogologo ogologo kilomita 8, nke enwere ike ịhụ ya site na ebe dị iche iche gburugburu ogige ahụ.
Ọzọkwa, tannic acid sitere na hemlock dara ada na agịga spruce na -acha ọbara ọbara mere mmiri nwere agba nke na -enye ebe ahụ. A na -enweta ọdịda ahụ n'afọ niile, na -egosipụta ọmarịcha okooko osisi ọhịa, vistas panoramic, na sled na -agba n'oge oyi.
27. Ọdịda Vernal
Ndị ọbịa na Ọdịda Vernal A na-emeso ya nke ọma site na iwere Mist Trail ma ọ bụ John Muir Trail n'ime Ogige Ntụrụndụ Yosemite nke California.
Vernal Fall dị ihe na -erughị kilomita site na akwa mmiri. Ụzọ abụọ ahụ dị iche naanị n'ofe akwa. Ndị na-awagharị awagharị nwere ike iso Mist Trail ruo elu nke Vernal Fall nke dị mita 317, ruo nzọ ụkwụ narị isii nke 'nnukwu ihe mgbapụta eke.'
N'oge opupu ihe ubi na mbido ọkọchị, na -atụ anya ịgba mmiri mmiri. Ị ga -achọpụta ọmarịcha ọdịda Nevada gafere Vernal Fall na Mist Trail.
Ọzọkwa, Ogige ahụ na -emeghe ma na -ada ada n'ihi na ọkụ na -agba ọkụ na Yosemite na ngwụsị July.
28. Waipo'o Falls, na Kaua'i
Ọ bụrụ na ị na -eleta Hawaii n'oge udu mmiri, ị ga -ahụrịrị Waipo'o Falls.
Mmiri mmiri dị mita 800 pụtara n'etiti nsụda mmiri Hawaii ndị ọzọ n'ihi na ọ nwere ọmarịcha ndabere nke Grand Canyon nke Pacific, nke a na-akpọkarị Waimea Canyon.
29. Ọbara ọdịda
Obodo Marin, Indiana
Na Mill Creek, Cataract Falls elu nke ọdịda abụọ. Oke Falls dị ihe dị ka mita 45 n'ogologo, ebe Lower Falls dị ihe dị ka mita 30 n'ogologo. Ọ bụkwa steeti Indiana nnukwu nsụda mmiri.
30. Ịgba mmiri
Dị ka ị na -ahụ na foto, na -atụle ịdị ukwuu ya na ọdịdị gbagọrọ agbagọ nke ukwuu, nnukwu mmiri mmiri a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300ft dị elu na ndepụta anyị.
N'agbanyeghị ịkekọrịta oke nchekwa na oke gọọmentị dịka nsụda mmiri ndị ọzọ dị na ndepụta a, ọ ga-eme njem ihu Mt Rainier nke dị anya karịa na Ọdọ Mowich iji rute ebe a.
Njem ahụ n’onwe ya mere ka ọ hụperetụ mkpọda ugwu kpụkọrọ akpụkọ nke Mt Rainier na nnukwu okwute basalt hexagonal nke si na ugwu mgbawa gbapụta.
Iji nweta foto a, a ga-agabiga Spray Creek nke fụrụ akpụ, nke na-enwe ọnọdụ ọpụrụiche dị ka mmiri n'etiti August 2011.
31. Ọdịda Walupt
O doro anya na nke a nwere ọdịdị pụrụ iche nke nsụda mmiri niile na nhọrọ anyị kacha mma na Washington.
N'ezie, ọmarịcha Union Falls na Yellowstone National Park nwere ike ịsọ mpi megide ya n'ụdị eccentric ya.
Nke ahụ kwuru, ọ were ezigbo ahụmịhe iji rute nsụda mmiri a, nke dị n'ime ime ebe dị anya nke National Gifford Pinchot Forest, n'etiti Mt St Helens na Mt Rainier. Enweghị ụzọ echekwara nke ọma ebe a.
32. Osimiri nduku daa
Mmiri mmiri abụghị ihe mbụ na -abata n'uche mgbe ọtụtụ ndị mmadụ na -eche banyere Midwest.
Osimiri nduku ọdịda, nke dị nso na Gurney, Wisconsin, ka akpọrọ otu n'ime nsụda mmiri dị egwu na mpaghara. A na -ahụ ọdịda nke ọma site n'ụzọ dị iche iche na njedebe nke Potato River Falls Road na ogige ntụrụndụ.
Agbanyeghị, Oke Oke na Mbeda nke nsụda mmiri ahụ na -adaba mita 90 n'ime osimiri. Ndị na-eme mkpagharị nwere ike rute n'elu Ọdọ Mmiri Osimiri Potato site n'ịgbaso akụkụ osimiri n'akụkụ ụzọ ọkara kilomita nke na-eduga na Oke Falls.
Ndị njem nlegharị anya n'oge mgbụsị akwụkwọ ga -enwekwa ohere dị egwu iji jide agba ọdịda.
33. Stepstone Falls na West Greenwich
Na ngwụcha okporo ụzọ Ben Utter, ị ga -ahụ ya Stepstone Falls, cascade na -agafe agafe. Ọ na -enweta aha ya site n'otú mmiri si asọba n'akụkụ ọnụ mbadamba nkume, na -eme ka ọ dị ka ogbugbu nke obere steepụ.
Ọ bụ ụzọ dị otu kilomita na ọkara nke na-aga n'oké ọhịa ahịhịa juru n'akụkụ osimiri ahụ, na mmiri na-acha anụnụ anụnụ kacha dị ịtụnanya ị ga-ahụ.
Sahalie Falls bụ mita 100 (30 m) nke ịfesa mmiri ọcha n'elu ihe mgbochi mmiri nkịtị. Ihe nkiri Disney "agbagoro agbada" nke Disney mara mma nke ukwuu.
Koosah Falls na -agbada na nnukwu ọdọ mmiri dị ihe dịka 21 m (70 ft) ma na -enye ọmarịcha ihe mana ọ bara uru ilele ya. Gaa na ugwu wee bido na Koosah Falls (ebe a na -adọba ụgbọala ka mma na Koosah.)
Ebe nlebara anya maka nsụda mmiri a nwere okpukpu abụọ na-ebigbọ n'ime ọdọ mmiri ndị dị n'okpuru bụ mkpagharị mkpirikpi 0.6 mile. Ọzọkwa, mgbada dị elu na -agbada ụkwụ 40, ebe ọdịda ala na -agbada mita 80 n'elu mgbidi basalt dị elu.
Ụzọ a na-aga site na osisi Douglas, osisi cedar na-acha uhie uhie nke Western, nnukwu akwụkwọ osisi, na oke ọhịa na-eto eto nke Pacific. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ike ịhụ Osimiri Umpqua North na Scenic River ka ọ na -agbada na ndagwurugwu nkume siri ike n'ọtụtụ ebe.
McWay Falls bụ ngosipụta doro anya nke njem okporo ụzọ Big Sur na California, nke amaara maka ọmarịcha ala gbara osimiri okirikiri karịa ịdị ebube nke Falls n'onwe ha.
Mmiri nke McWay Falls, dị na Julia Pfeiffer Burns State Park, bụ mmiri sitere na McWay Creek banye n'oké osimiri (ma ọ bụ ájá, dabere na ọkwa oke osimiri).
Ọzọkwa, Falls na -adị ndụ n'ezie mgbe anyanwụ dasịrị. Ịgbada na ala bụ ihe megidere iwu yana ihe egwu.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ha ejide gị, ị nwere ike ịta ntaramahụhụ $ 300. Jụọ onye na -elekọta ogige ma ị nwere ike gbadaa na ala na kayak, dị ka ụfọdụ ndị mere.
37. Ọdịda asaa
Gị Mmiri asaa na South Cheyenne Canyon, dị na mpụga Colorado Springs, maka ilele ihe ịtụnanya okike pụrụ iche nke Colorado.
Gbago na steepụ 224 na elu ugwu ahụ iji hụ ọdịda, ma ọ bụ jiri igwe mbugo dị n'ugwu maka njem izu ike karịa. Nke ahụ bụ otu usoro iji jide n'aka na ị ga -enweta usoro gị kwa ụbọchị!
38. Ọbara Cf Creek
Ogige Ntụrụndụ Capitol Reef, Utah
Ọkpụkpụ nwa ehi Creek bụ naanị otu n'ime ọtụtụ atụmatụ mara mma nke mpaghara Grand Staircase-Escalante, nke nwere ụfọdụ ọzara mara mma nke obodo.
Ndị na -eme mkpagharị ga -agarịrị ọdọ mmiri beaver na saịtị nka nka ihe ochie na -aga ụkwụ nke ọdịda ka ha wee rute n'ọdọ mmiri.
Ọdụ ala Mesa Falls na Oke Mesa Falls bụ nsụda mmiri dị egwu na Henrys Fork nke Osimiri Snake na Forest National Caribou-Targhee.
Osimiri ahụ na-agbada na obere ndagwurugwu nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ya gburugburu na ọnụ ọnụ ugwu nwere osisi, ihe karịrị nde afọ mgbawa ugwu.
Ọ bụ nke mbụ ụmụ m na -abịaru nso nnukwu mmiri iyi dị otú ahụ, wee fepụ. Oke Mesa Falls gụnyere obere ụzọ mbata nke nwere ọtụtụ echiche.
A na-ahụ Lower Mesa Falls site na Grandview Overlook ma na-enye echiche dị anya maka ọdịda. Ọ bụrụ na ị na -achọ ntakịrị njem, enwere njem otu kilomita n'etiti nsụda mmiri abụọ ahụ.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị ebube ma ọ bụ buru ibu dị ka ụfọdụ nsụda mmiri ndị ọzọ dị n'elu ndepụta anyị, ọpụrụiche ya dị ka nsụda mmiri dị n'okpuru ala na akụkọ nchọpụta ya mere ka ọ bụrụ ihe ruru eru itinye ya.
Anyị gbasoro ụzọ onye nchọpụta ya, Leo Lambert, mere na 1928, ụkwụ ya dị 260 n'ime ugwu ahụ, ewezuga na ọ wara ebe dị warara.
Ugbu a, ọkụ na -enwu enwu na -eme ka stalagmites, stalagmites na ọmarịcha okwute ndị dị ebube.
Ọzọkwa, ọgwụgwụ nke ụzọ na -eduga Ruby Falls, nke ihe ngosi ọkụ mara mma gbara ya gburugburu na -eme ka ọ maa mma karịa. Ọ bụ nsụda mmiri dị n'ime ime ala kacha elu na nke miri emi nke United States na -ekpughere ọha.
Mmiri nsụda mmiri ọ bụla nwere ụdị nke ya, site n'ọgba aghara ruo n'ọgba aghara. Ụfọdụ dị ogologo ma dị gịrịgịrị, na -agbada ihu ugwu dị elu wee banye n'oké ifufe na -efegharị n'okpuru.
Ndị ọzọ na -adị mma n'anya, na -agbasa na steepụ okwute na akpaetu. Mgbe ọdịda dara nke ukwuu n'oge oyi, ị nwere ike gaa n'azụ ụfọdụ n'ime ha ma rịgoro n'elu ndị ọzọ.
Ị ga -arụ ọrụ ọsụsọ iji rute na ụfọdụ nnukwu nsụda mmiri. Otú ọ dị, ha na -enye ezumike na -enye ume ọhụrụ na ncheta dị ịrịba ama nke ike okike.
Mmiri mmiri na -asọgharị n'ogige ntụrụndụ mba ma na -echekwa ya, a na -ewepụ ya na ogige steeti naanị ndị obodo maara. Ọzọkwa, ndị na -anụ mmiri mmiri ga -ejegharị ma ọ bụ jiri igwe kwụ otu ebe gaa ọtụtụ puku kilomita iji hụ ihe atụ ndị a pụtara ìhè nke okike na -eme.
Biko hapụ okwu, dị ka akụkọ a na Waterfalls Near Me, ma gwa ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị gbasara ya!
Tags:nsụda mmiri kacha mma na US ka igwu mmiri, nsụda mmiri kacha mma n'ụwa, ole nsụda mmiri dị na steeti ndị dị n'otu, ezumike mmiri mmiri United States, nsụda mmiri n'ime anyị nke ị nwere ike igwu mmiri, nsụda mmiri na maapụ usa, kedu steeti nwere ọtụtụ nsụda mmiri
Kedu anụmanụ kacha dị egwu n'ụwa na ala na mmiri
Ebe kachasị mma iji gaa gburugburu ụwa na Disemba maka ezumike ọchị